Suavecito Bay Rum Beard Oil | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Beard, Mustache, Body & Fragrances › Suavecito - Bay Rum Beard Oil
Regular price MMK 26,000
Single - MMK 26,000 MMK3Pack - MMK 76,000 MMK
အမျိုးအစား: ပါးသိုင်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်နှင့် ဆံပင်ဆံသားထိန်းသိမ်းဆီအရည်
--Nourishment for your Beard, Mustache & Hair--
Suavecito - Bay Rum Beard Oil ဆီသည် နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးအတိုအရှည်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီပြီး၊ Argan Oil ကဲ့သို့ သင့်ဆံသားအတွက် အကျိုးရှိစေသော သဘာဝအဆီဓာတ်များနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ပုံမှန်အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် သင့်မုတ်ဆိတ်ပျော့ပြောင်းနူးညံ့စေပြီး၊ ကြမ်းတမ်းမှုများကိုဖြည်လျှော့ပေးကာ လိုအပ်သော ရေဓာတ်နှင့် အဆီဓာတ်များကိုဖြည့်တင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော် အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှထုတ်လုပ်ထားပြီး နိုင်ငံအသီးသီးမှာလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြပါသည်။
အရည်အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်လည်း အာနိသင်စုပ်ယူအားကောင်းကောင်းဖြင့် ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်းများကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီး၊ Bay Rum ရနံ့ဖြင့်လန်းဆန်းစေကာ သင်ထားရှိချင်တဲ့ ကြည့်အကောင်းဆုံး မုတ်ဆိတ်မွှေးနှင့် ပါးသိုင်းမွှေးတစ်စုံကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်ဆံသားကြမ်းခြောက်နေမှုများအတွက် Hair Oil အဖြစ် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အစိုဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ ပျော့ပြောင်းချောမွေ့စေပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ: Beard Oil ပုလင်းကိုအသာအယာလှုပ်ပြီး၊ သင့်တော်သည့်ပမာဏကို လက်ဖဝါးပေါ်သို့တင်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ပြီး သင့်မုတ်ဆိတ်၊ ပါးသိုင်းမွှေးနှင့် နှုတ်ခမ်းမွှေးတို့ကို အမြစ်မှအဖျားအထိ ကောင်းမွန်စွာလိမ်းပေးပါ။ ညီညာသွားစေရန် မုတ်ဆိတ်ဘီးကိုအသုံးပြု၍ ဖြီးပေးနိုင်ပါသည်။ ဆံပင်ဆံသားကြမ်းခြောက်နေမှုများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မုတ်ဆိတ်မွှေးနှင့် နှုတ်ခမ်းမွှေးတို့ကိုအားဖြည့်ပေးပြီး ပျော့ပြောင်းနူးညံ့စေခြင်း
Bay Rum ရနံ့ဖြင့်သင်းပြံ့စေခြင်း
A good beard is one that is well taken care of. A great beard is one that conditioned with Beard Oil! This beard oil recipe is made up from natural ingredients to ensure you have healthy, well maintained facial hair or mustache. Made from natural ingredients, such as Argan Oil, which is most commonly used to make hair softer, silkier and shinier naturally. Use this beard oil to condition your beard or your mustache. It comes with Bay Rum fragrance and works for any beard style or mustache style.